Posted by Tranquillus | Sep 4, 2018 | Tababarka internetka
G Suite, waa maxay?
tani waa aaladda qalabkalaakiin sidoo kale software Google oo guud ahaan loo isticmaalo xirfadlayaasha. Helitaanka qalabkan wuxuu u baahan yahay rukun si uu uga faa'iidaysto dhammaan qalabka.
Qalabkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si karti leh u shaqeyso inta aad mareyso warbaahin badan. Runtii, software waa mid la heli karo oo laga faa'iideysan karo kombiyuutar, kiniin ama xitaa telefoonka.
Maxaa ku jira G Goolka?
Qalabkuna waa badan yahay, markaa maxay u yihiin? Waxay kuu ogolaanayaan inaad shaqeyso oo aad gasho dhammaan farsamooyinka lagama maarmaanka ah si aad u fuliso mashaariicdaada.
Waxaad marka hore marin u heli kartaa qalabka isgaarsiinta si aad ugu xirnaato asxaabtaada oo aad wax soo saar u lahaatid meelkasta oo aad joogto Gmail, Google +, Hangouts Meet, Calendar ... Wixii loo baahnaa ayaa jira!
Kadib, qolkani wuxuu bixiyaa barnaamijyo badan oo hal abuur leh si loo dhiso, loo hormariyo loona dhameystiro mashruucaaga. Docs, Sheets, Forms, Keep, Jamboard… Xulashada aaladaha waa balaaran yihiin dhamaantoodna waxay leeyihiin isticmaalkooda gaarka ah, oo midba midka kale kaabaya
Ugu dambeyn, G Suite waxay bixisaa qalab lagu kaydiyo xogta si wax ku ool ah loo ilaaliyo mashaariicda kala duwan. Iyada oo Google Drive iyo Google Cloud waxaad ku soo celin kartaa dukumiintigaaga iyo macluumaadkaaga meel kasta oo aad la leedahay aqoonsiyadaada.
Qalabkan waxaa sidoo kale ku jira amniga iyo goobaha la heli karo si ay kaaga caawiyaan ilaalinta xogtaada iyo shaqooyinkaaga si waxtar leh. Sidaas ayaad ku kalsoonaan kartaa una qaadan kartaa G Suite mashaariicdaada, baro sida loo isticmaalo hadda!
Maxay u tegi kartaa Xarunta Tababarka Geelka?
G Suite waa mid aad u dhameystiran kaas oo u baahan kara wakhti dheer ama waqti gaaban oo ku xiran hadba ku xiran xirfadahaaga kombiyuutarkaaga iyo barnaamijyada la midka ah. Sidaas daraadeed xiiso u leh inaad barato sida ugu badan ee qalab kasta. Qoraalada akhrinta iyo daawashada fiidiyowyada waxay ku siin karaan jawaabo iyo caawimo. Si kastaba ha ahaatee, qaabka ugu fiican ee lagu baran karo barnaamij kasta waa Gue Training Center. Tababarkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si buuxda u isticmaasho qalab kasta iyada oo loo marayo talo, iyo marqaatiyaal.
Waxaad helaysaa tilmaamo ku tababaraya adiga oo raacaya baahidaada iyo meelahaaga. Haddii aad raadinayso hagaha degdega ah si aad u bilowdo qalabyada Google, tababarka dhakhso ah ayaa la heli karaa.
Hagahan waxaa loo jajabay dhowr tallaabo oo si dhakhso ah oo wax ku ool ah u muujinaya muuqaalada qalab kasta iyo barnaamijka la heli karo G Suite:
Ku kaydi oo wadaag faylasha
Wadashaqeyn qalabyada G Suite
Samee wicitaanno video
Hagaajinta adeegyada G Suite
Si kastaba ha noqotee, haddii tilmaan-bixiyahan degdeg ah uusan ku filneyn, waxaad heli kartaa tababar dhamaystiran oo loogu talagalay qalab kasta oo ku salaysan goobahooda.
Tababar loogu talagalay kaydinta
Xarunta Waxbarashadu waxay bixisaa hagaha darawalnimada si aad u ogaatid sida si wax ku ool ah loo kaydiyo, la iskugu duwo, loona wadaago xogtaada.
Tilmaamahani wuxuu ku bari doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ogaatid oo aad udheeraato inaad ka faa'iideysato qalabkan Waxaad baran kartaa sida loo soo dhoofiyo loona kaydiyo xogtaada, isku dhejinta, aragtida, isbedelka, wadaagida, qaybinta iyo raadinta si waxtar leh.
Dhamaadka tababarkan waxaad awood u yeelan doontaa inaad hagaajiso aaladda si aad xogtaada ugu hayso meel isku mid ah faylasha qaabab kala duwan. Waxay heli doonaan meel kasta oo aad joogtid oo aad marin u heli kartid walaaca adiga.
Tababar loogu talagalay isgaarsiinta
Xarunta tababarka waxay bixisaa hagayaal badan si ay u bartaan sida si buuxda loo isticmaalo mid kasta oo ka mid ah qalabkan:
Hagaha Gmail, waxaad baran doontaa sida loo sameeyo iimaylada ka hor intaadan dirin, sida loo habeeyo sanduuqaaga boostada email oo si hufan u hel iimayladaada, samee saxiixyo xirfad leh oo gal macluumaadkaaga (jadwal, hawlo, qoraalo).
Raadinta Buugga Cloud-ka ah waxaad awoodi doontaa inaad raadiso oo aad shakhsiyadeesho adeegyada iyo xiriirada, maamulida koontadaada iyo dhaqdhaqaaqaada, ama raadso gargaar kala duwan ee faylashaada.
Hoyga waxaa lagu hagi karaa hagaajinta hagayaal si aad u baratid sida loo isticmaalo wicitaanada sheekeysiga iyo fiidiyowga, laakiin sidoo kale la wadaagaan shaashadda oo ku marti qaado xiriirkaaga. Waxaad tababar ku qaadan kartaa Hangouts Meet, Hangouts Chat, iyo nooca caadiga ah.
Agenda sidoo kale waa qalab si dhaqso ah u noqon doona mid aan loo baahnayn. Sidaas daraadeed waa lagama maarmaan in la barto sida loo isticmaalo si deg deg ah xaruntu waxay ku siineysaa fursadan. Baro sida loo qorsheeyo dhacdooyinkaaga oo ku dar xasuusinta. Shakhsiyad u samee oo abuurto qorshe guud oo loogu talagalay koox. Si aad u fuliso mashaariicdaada, waxaad u baahan doontaa urur wanaagsan oo qalabkan ayaa kaa caawin kara halkaa.
Kooxuhu sidoo kale waa aalad xiiso leh oo lagu maareeyo kooxaha wada hadalka, sameynta liisas, la wadaaga faylasha guide Hagahan wuxuu markaa kuu oggolaanayaa inaad barato inaad hesho koox sax ah oo aad ka mid noqoto, ka dibna lagu daabaco kooxaha. Waxaad sidoo kale abuuri kartaa koox si aad ula shaqeyso kooxdaada adigoo ilaalinaya suurtogalnimada inaad maareyso kooxaha aad ku jirto.
Ugu dambeyntii, Google + waa qalab kuu oggolaanaya inaad la xiriirto kooxdaada iyo asxaabta kale iyada oo loo marayo shabakad bulshadeed oo shirkad ah oo si ammaan ah u aamin ah. Waxaad baran kartaa sida loo abuuro bulsho internetka ah si loola wadaago macluumaadka iyo fikradaha. Tilmaamuhu wuxuu kaa caawin doonaa inaad sameysid profile, helitaanka dadka saxda ah oo raac, laakiin sidoo kale abuuro beelahaaga, uruurintaada, iyo daabacaan waxyaabahaaga gaarka ah.
Xarunta tababarka G Gure waa mid aad u faa'iido leh si aad uhesho qalabka isgaarsiinta sida ugu dhakhsaha badan.
Nambarku waa tiro badan, laakiin xarunta tababarka G Suite waxay bixisaa hagid dhamaystiran oo loogu talagalay mid kasta. Tani waxay suurtogal u tahay in la barto sida loo sameeyo isticmaalka ugu wanaagsan ee software la sameeyay.
Hagaha Docs, waxaad baran doontaa sida loo abuuro, laakiin sidoo kale soo dheji bandhigyadaada. Waxa kale oo aad wax ka beddeli kartaa dukumintiyadaada, la wadaagaan iyaga oo la shaqeeya kooxdaada kadibna soo qaad oo daabac. Qalabkani wuxuu muhiim u noqonayaa shaqadaada kooxda, sidaa daraadeed waxaa muhiim ah in la raaco tababarka si loo isticmaalo software-kaaga.
Wixii waraaqo ah, waxaad baran doontaa sida aad ugu shaqeyn lahayd koox ahaan mashiinnada faafinta. Tilmaamahan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abuurto oo aad dib u soo dhoofiso bandhigyadaaga, ku dar waxyaabo ku saabsan, la wadaagto, soo qaado oo daabacdo.
Saabashadu sidoo kale waxay noqon doonaan barnaamij waxtar leh oo ku shaqeeya kooxdaada sababtoo ah waxay u ogolaaneysaa wada shaqeeyn isku duuban oo ku saabsan bandhiggaaga. Asaaska aasaasiga ah ayaa kuu oggolaanaya inaad abuurto oo aad soo dhoofiso nuxurka, ku daro, la wadaagto, soo qaadato oo daabacdo bandhiggaaga. Sidaas awgeed waa muhiim in la doorto xarunta tababarka si loo isticmaalo qalabkan.
Foomamka waxay suurtogal u tahay in la abuuro oo lagu falanqeeyo sahaminta iyada oo la adeegsanayo hirgelinta su'aalaha, falanqaynta jawaabaha iyo abuurista dhacdooyinka. Xarunta tababarka si dhakhso ah ayuu u bartaa sida loo abuuro su'aalo-waydiina u habeyn ka hor intaadan u dirin, ka dibna falanqee jawaabaha si ay uga faa'iideystaan ​​mashruucooda.
Meelaha sidoo kale waa qalab aad u macquul ah oo lagu hormarinayo mashruucaaga xirfadlaha ah tan iyo intii uu u oggolaanayo abuuritaanka goobo dadweyne oo wada shaqeynaya mashaariicda gudaha. Baro sida loo abuuro boggaaga, shakhsiyadeeyo una cusbooneysiio si wax ku ool ah si aad u wadaagto uguna daabacato goobtaada.
Ugu dambeyn, Hayso waa software loo isticmaalo si loo abuuro liisaska shaqada iyo xusuusinta qaabab kala duwan. Sidaas daraadeed waa lagama maarmaan in la ogaado sida loo adeegsado si horumar loogu sameeyo mashruuciisa inta uu la shaqeynayo kooxdiisii. Xarunta Waxbarashada ee Gite wuxuu kuu ogolaanayaa inaad barato sida loo abuuro loona badiyo xusuusta, u habee si sahlan. Waxa kale oo aad baran doontaa sida loo dejiyo xasuusintaada oo la wadaagto xusuustaada illaa aan loo baahnayn oo aad tirtirto.
Sidaa darteed xarunta xarunta Gite waa in la xusuusto in dhammaan qalabkani ay si dhakhso ah uga warhayaan si ay si buuxda ugu isticmaalaan si ay u dhisaan mashaariicdaada xirfadeed.
Xarunta Tababarka Geela Sebtembar 4th, 2018Tranquillus
horeSidee ayaad u abuuri kartaa shaqadaa oo aad madaxbannaaneysaa?
socdaHagaajinta Isgaarsiinta Xirfadahaaga Shaqada